Yingzụta Mkpụrụ Cannabis na Ntanetị Iwu - Ntuziaka Dị Mfe na Marijuana Seeds
Yingzụta Mkpụrụ Cannabis N'ịntanetị
Ọ bụ iwu zụrụ igbo mkpụrụ osisi na ntanetị?
Kedu otu ị ga - esi zụta mkpụrụ osisi cannabis n'ụzọ iwu?
Izu osisi cannabis na ntanetị nwere ike bụrụ ihe iwu dabere na ebe ị bi, ma ọ bụ nwere ike imebi emebi - isiokwu a, vidiyo dị n'elu na plọg pod n'okpuru, na-agbakọ iwu nke ahịa mkpụrụ cannabis n'ịntanetị .. States na-emelite wii wii ma ọ bụ iwu cannabis n'ụzọ ziri ezi mgbe niile - dịka ọmụmaatụ, Illinois ulo iwu kwadoro na-eto na Jenụwarị nke 2020 maka ndị ọrịa ya. Illinois nyekwara ikike maka ire mkpụrụ osisi cannabis site na nkesa. Nke a bụ ihe sitere na iwu cannabis nke Illinois na-enye ohere ịhapụ mkpụrụ osisi cannabis, nke nwere ike ree ya site na ngalaba nkesa site na weebụsaịtị ha.
Ọ bụ iwu zụrụ mkpụrụ osisi
(3) Ndị ọrịa tozuru etozu edepụtara nwere ike ịzụta mkpụrụ osisi cannabis site na ngalaba maka ebumnuche ụlọ. Enwere ike inyeghi mmadụ ma ọ bụ resị ya mkpụrụ ọ bụla.
EBIGBO EGO: Nto Uto Ulo ulo na Illinois
EBIGBO EGO: Wet Wet ma ọ bụ Akọrọ Akpịrị Agwọ?
Chọrọ Imepe Mmepe Iwu
Ihe ị ga-achọ mgbe ịzụrụ mkpụrụ osisi cannabis
Yingzụta mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị kwesịrị ịdị mfe. Go gaa na websaịtị, wee họrọ ụdị ngwaahịa dị iche iche, were bulie ngwaahịa kachasị mma maka onwe gị. Ọ dị mma, mana ọ bụghị nke ahụ dị mfe.
Will ga - ahụ ọtụtụ ebe na - emejọ ndị mmadụ n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ị ga - aga n'ihu mgbe ị na - achọ mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị. Weebụsaịtị ndị a na-akwalite mkpụrụ osisi cannabis na mmetụta ha dị ike, mana ndabere nke saịtị ndị ahụ gbara ọchịchịrị.
Mgbe ahụ, olee otu esi achọta mkpụrụ osisi cannabis kacha mma n'ịntanetị?
Nwere ike ịchọ isi mmalite ndị dị mkpa dị na ihe nchọgharị ịntanetị ọ bụla. A ga-enwe ọtụtụ mkpokọta weebụsaịtị dị iche iche karịa karịa ị happyụrị ọ sellụ ire gị mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị ma ọtụtụ ga-asị na ọ bụ nke iwu. N'isiokwu na-eso nke a, ị ga-amụta otu esi achọta ezigbo ebe ịzụta mkpụrụ osisi cannabis yana otu esi eji ha nke ọma mgbe ị nwere ha n'ụlọ.
Ndị a bụ azịza ya.
Gini mere Mkpụrụ Osisi Cannabis ji ama ama?
Mkpụrụ osisi cannabis bụ ndị a ma ama n'ịntanetị n'ihi na ị gaghị ahụ ya na ụlọ ahịa mgbe niile. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa cannabis na-ere naanị ọnụ ọgụgụ dị nta nke ngwaahịa cannabis, mkpụrụ anaghị adịkarị na ndepụta ahụ.
Kedu ihe ị ga-eme iji nweta mkpụrụ osisi cannabis kacha mma n'ịntanetị?
Iji nweta mkpụrụ osisi cannabis kacha mma n'ịntanetị, ị kwesịrị ị lelee weebụsaịtị ndị a:
Mkpụrụ Mkpụrụ nke Royal
Enwere nsonaazụ atọ kachasị elu sitere na nchọta ọchụchọ Google banyere ajụjụ a na-ajụ ọtụtụ puku ugboro kwa ọnwa, ọbụlagodi site n'aka gị - ịgbalị chọta ozi ndị ọzọ gbasara ire mkpụrụ osisi cannabis nke iwu.
Mgbe ụfọdụ, ị ga-ahụ ụdị nri dị obere ma sie ike, mana ịkwesịrị ịchọ iwu mkpụrụ osisi cannabis na steeti gị akọwapụtara. Mgbe ichoputara nkpuru nkpuru nke anabatabeghi nke oma, obu ihe iriba ama ma aga - achogharia nkpuru ndi ozo di nkpa.
Ọ dị mfe ịzụta mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị mgbe ị nwere ihe omuma banyere mbụ iwu. N'ọtụtụ steeti, enwere ike ịnweta ndepụta nke ụdị cannabis iche ị nwere ike ịzụ ma ọ bụ ree. Jiri ezigbo nduzi mgbe ị na-achọ mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị.
Mkpụrụ Mkpụrụ Cannabis Ga-abawanye na Ọnụahịa?
O doro anya ihe kpatara na mkpụrụ osisi cannabis nwere ọnụ ahịa dị elu na ahịa. Varietiesdị ndị a dị ụkọ, ụkpụrụ ha dịkwa aghụghọ, ọ bụ ya mere ọtụtụ mkpụrụ ji dị oke ọnụ.
Eleghị anya ị ga-ahụ ndị nwere ọdịnaya THC dị elu mgbe ị na-agagharị otu nzọụkwụ ma mepụta ndepụta mkpụrụ mkpụrụ osisi kachasị amasị gị. Ọ bụrụ na ọdịnaya dị elu karịa 0,3%, mgbe ahụ ịkwesịrị ịga maka ndị ọzọ.
N'ihe banyere ịchọtara mkpụrụ nke kachasị dị na steeti dị iche iche, ọnụahịa ahụ ga-abụkwa nkezi. N'ihe banyere ụfọdụ ụdị, ị ga-achọpụta na ọnụahịa ahụ nwere ike ịrị elu ma ọ bụrụ na ihe a chọrọ dị elu n'oge nyocha ịntanetị maka mkpụrụ osisi cannabis.
Iji nweta ọnụahịa kachasị mma na njiri mara mma n'otu oge, ị kwesịrị ilekwasị anya na mkpụrụ osisi cannabis dị mma maka wii wii ma nwee ọnụ ahịa ezi uche n'otu oge. Enwere ike ị nweta ụdị mkpụrụ a n'ịntanetị, ị ga-ahụ ụdị zuru oke maka mkpa gị.
Etu esi ahọpụta Mkpụrụ Cannabis kacha mma?
Karịrị ụdị mkpụrụ osisi 3000 dị na ahịa ugbu a. A na-ahụkarị ụdị ndị a na ebe ị nwere ike ikesasị mkpụrụ ndị ahụ n'ụzọ iwu. Na steeti ụfọdụ, iwu kwadoro ịzụta, ree, na kesasị mkpụrụ osisi cannabis site na iji ikike ziri ezi nke akwụkwọ maka ijikwa mkpụrụ osisi cannabis.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịsọpụrụ na usoro cannabis, ịnwere ike ịnweta kaadị azụta ọgwụ ma ọ bụ nke ntụrụndụ iji rie ngwaahịa njedebe. Ruru ike gị - rube isi n'iwu niile dị na steeti gị.
Mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị na-abịa n'ọtụtụ nchịkọta. Otu ngwungwu kachasị zụrụ azụ bụ ngwugwu nke mkpụrụ 10 nke ejiri nlezianya na nlekọta lekọta. N'otu oge, ị nwere ike ịzụta ọtụtụ igbe ma nweta ụdị ndị ịchọrọ kachasị. Ọ bụrụ na ụdị mkpụrụ ọ bụla adabaghị, ị nwere ike ịkwụghachi nkwụghachi ma rapara na mgbakwunye ndị ọzọ maka ịzụta na ire mkpụrụ osisi cannabis.
Mkpụrụ Mkpụrụ Cannabis bụ Iwu Iwu n'okpuru Iwu Federal?
Nke a bụ okwu iwu "marihuana" n'ogo gọọmenti etiti n'okpuru Usoro Nchịkwa Ihe Ekike - Nke emelitere ikpeazụ: June 21, 2020
N'oge ọtụtụ nhọrọ dị, ị nwere ike ịga nke kachasị mma ma chọọ naanị ngwaahịa ndị nwere ekele dị ukwuu na ahịa. Mgbe ịzụrụ mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị, chọọ mkpụrụ ndị dị mma maka uto wii wii, ma nwee ọnụahịa zuru oke maka mmefu ego gị mgbe ị na-enweta onyinye mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị.
Wantchọrọ ịzụta mkpụrụ osisi cannabis n'ịntanetị, mana mee ya n'ụzọ iwu - nke ọma, onweghị ụzọ gị - ma ọ bụ nke ọ bụla - ga - esi nweta ndụmọdụ gbasara iwu site na ọwa youtube - mana ndị mmadụ na - akpọ m oku na - ajụ otu esi eme nke a na iwu na Illinois, ndị niile nọ na steeti ọzọ ga - achọkwa ozi a, ya mere, ọ dị ka ihe zuru oke nke…
Etu ndi mmadu si nweta nkpuru osisi na steeti gi
Ka anyị kwuo maka otu ị nwere ike isi mee ka ubi gị na-eto eto - yabụ ọkacha mmasị na ntinye mmadụ niile. Cheta ịlele iwu obodo gị gbasara mmụba ụlọ. N'ebe a na IL, naanị ndị ọrịa nwere ike ibu ibu. Ha nwere ike ịzụta mkpụrụ, mana ebee ka ị ga - esi nweta ha - ma fechaa ruo na njedebe ma ị ga - amụta ka mkpụrụ osisi cannabis si nwee ike ịbanye na steeti ndị iwu kwadoro ọhụụ n'agbanyeghị ịbụ onye omekome ụbọchị gara aga, ma ọ bụ onye omekome ruo mgbe ị nwetara ikikere na enweghị inwe ikike ahụ. Steeti nye gị osisi.
Anyị ga-ekwu maka ihe 5 ị ga-atụle mgbe ị na-enweta mkpụrụ osisi cannabis maka ụlọ obibi ahụike gị - ma ọ bụ jiri okenye tozuo ụlọ ma ọ bụrụ na steeti gị kwere nke ahụ - anyị niile na-ekpekwa ekpere IL na WA iwu n'oge na-adịghị anya. Mana lelee anya ka ụlọ toro maka iji ndị okenye - ọtụtụ mgbe DEA na-abata - dịka na CO mgbe ụlọ tolitere maka ndị okenye ghọrọ iwu na CO nwetara njirimara akara na steeti ndị gbara ya gburugburu.
Kedu nke na-ewetara anyị ihe mbụ ịtụle mgbe ịzụrụ mkpụrụ -
Okwu ndị metụtara mmanye iwu maka yingzụta Mkpụrụ Mkpụrụ Wiwanetị Online
Emebigala ókè oke gị. Chọrọ ahụike ị banye na ọgwụ gị ọ bụghị nsogbu ọ bụla - dị ka Glenn Keeling, mere ya n'ihi ịmịpụta, hapụ ka ọ na-eto, ọgwụ. Steeti esetịpụtara oke - rapara n'ahụ ha. Dịka ọmụmaatụ, IL na-ahapụ ndị ọrịa ka ha kụrụ osisi 5 n'otu ụlọ na-enweghị ndidi - lelee iwu mpaghara gị wee hụ ụdị osisi ị nwere ike ịnwe ma rapara na ya n'agbanyeghị mkpụrụ ọ bụla ị zụrụ.
Kedụ ka & ịzụta osisi Cannabis - ma ọ bụ mkpụrụ wii wii?
N'ime iwu okenye iji Illinois ọhụrụ - ha kwuru na ị nwere ike ịzụta mkpụrụ site na igwe okwu, mana ị nweghị ike ịzụta ifuru site na ụfọdụ dispensaries. Ma ọ bụrụ na nke a bụ 2022 mgbe ị na-elele nke a, anyị nwere ike ịdị mma, mana ugbu a steeti gị cannabis - ma kwewo ka ụlọ tolite ma ọ bụrụ na ị gaa ịzụta mkpụrụ, mana ọ dịghị.
Etu, olee otu esi kọwaa mkpụrụ - gịnị kpatara ị ga - eji zụta ha ebe ọ bụla na ịntanetị? Iwu a na-achịkwa akọwapụtara wii wii ka akụkụ niile nke osisi cannabis na-eto ma ọ na-eto, ma ọ bụ na ọ gaghị akụ, na mkpụrụ ya. Farmkpụrụ ugbo nke ugbo 2018 nyere iwu ka ọ bụrụ naanị maka akụkụ nke osisi cannabis na mkpụrụ ya maka ịkọ ma ọ bụ ụdị - nwere nnukwu 0.3% THC ma ọ bụrụ na etolite n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Iwu nke Ọchịchị na-akọwapụta onye ga-ere ihe, gụnyere mkpụrụ na kwa. Yabụ, steeti ụfọdụ ga-ahapụrịrị ndị ọrụ ugbo ka ha ree mkpụrụ ha n'ịntanetị, ma ọ bụ ikekwe Canada na - ere ya - mana na Europe, Amsterdam ma ọ bụ Barcelona dịka ọmụmaatụ - ikekwe ịzụta mkpụrụ ndị a dị ka ihe ncheta.
Ọ baghị uru - mana ọ ga - egosi nnabata ndị na - etinyeghị iwu wii wii - dịka ha anaghị eme na Kalifonia, n'ụsọ osimiri ọdịda anyanwụ - isi obodo - nnukwu steeti Illinois ma nwee olile anya na steeti gị bịara naanị ntanetị.
Ndị a bụ ebe iji zụta ha mkpụrụ n'ịntanetị -
Ọzọ, ị naghị enweta ndụmọdụ gbasara iwu site na youtube - mana ebe a bụ ebe ndị na-ere mkpụrụ: Na Europe
Ndị Na-enye Mkpụrụ Mkpụrụ nke Europe
Ihe omumu DNA
Mkpụrụ Green House
Ndị na-enye mkpụrụ osisi cannabis US
Mkpokọta Mkpụrụ Humboldt nke Ndịda
Mkpụrụ ndụ ihe nketa Mephisto.
Ego ole na ụdị mkpụrụ osisi cannabis ị ga-azụ?
Dude, anaghị m enye gị ndụmọdụ gbasara iwu ma anaghị m enye gị ndụmọdụ toro eto. Nwere ike chọọ ịbụ ihe egwu ma soro mkpụrụ mgbe niile, na ị ga-edina onwe gị ma zụọ ha oge niile site na oge foto ha na ifuru ka ịwere ihe ubi, ma ọ bụ na ị nwere ike ịpụsị ụfọdụ nke ahụ ma soro mkpụrụ nke ejiri mara - ma ọ bụ ikekwe a onye mbido na akpa ego gị.
Nyochaa mkpụrụ akụ ndị ahụ ọzọ - njikọ dị na nkwupụta maka gị ka ị chọpụta ihe niile ndị mkpụrụ ndụ ihe nketa ga-agwa gị gbasara mkpụrụ ha - lelee ihe ndekọ instagram ha maka ifuru na-arịa ọrịa nke a na-akpọ ntụpọ dị na 2020.
I nwere ike ihu onwe gi jua -
Aga m ejide m maka mkpụrụ cannabis ma ọ bụ wii wii?
Chee echiche banyere otu ihe - ma ọ bụrụ na-amasị gị - mebie ha nwere mmasị ma kwụọ ụgwọ. Kedu otu ụzọ ntaramahụhụ si enweta marijuana ma ọ bụ nnweta cannabis? Ibu ya. Ego ole ka mkpụrụ osisi cannabis na-eburu?
Odi obere. Ole ole?
Mkpụrụ osisi cannabis dị naanị gram 1.5-2.5 n’arọ ọ bụla.
Mkpụrụ osisi cannabis dị ọkụ
Soo .. chee banyere ya - IL nwere ikike 10 gram ma ọ bụ ihe na-erughị na 2016 - yabụ ị ga-achọ narị narị mkpụrụ maka nke ahụ.
Naanị ihe ọghọm dị obere ọ dị.
Mmechi maka Mzụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Wiwanetị n'ịntanetị
Kedu nke na-ewetara anyị na nkwubi okwu - ma ugbu a azịza nke otu esi osisi cannabis na-eme nke ọma n’ime steeti ndị iwu kwadoro n'agbanyeghị ịbụ onye omekome ụbọchị gara aga.
Daalụ maka ịrapara gburugburu - dịka & ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ nke a - n'ihi na ị ga-enweta ọkwa nke akụkọ iwu cannabis - ụbọchị wednesday na elekere abụọ nke ehihie.
Isi mmalite nke Mkpụrụ osisi Cannabis n'ịntanetị:
Agbagharala m - ọ bụ mmejọ ịntanetị - ozi gbasara mkpụrụ osisi cannabis nwere ike ịchọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ịntanetị: